Warshaalee Sukkaaraa sadiif Birrii miliyoona 50 oliin hojiin haaromsaa hojjatameeraafi
Thursday, 03 November 2016 13:39
Finfinnee, Onkololeessa 24, 2009 (oromiapo) Warshaalee Sukkaaraa biyyattii keessaa sadii duraaniif baasii Birrii miliyoona 50 oliin suphaan guutuu taasifameerafi.
Korporeeshiniin sukkaaraa akka ibsetti warshaaleen hojii haaromsaa kun hojjatameef waggaa darbe hanqina meeshaa jijjiirran oomisha hanga yaadame oomishuu kan hin-dandeenye Warshaalee Sukkaaraa Finca’aa, Matahaaraa fi Wanjiidhaafi.
Itti-aanaa Hoji-raawwachiisaa Damee Oppireeshinii Korporeeshinichaa Obbo Waayyuu Roobaa warshaaleen kunniin biyyattiitti oomisha sukkaaraa olaanaa oomishuun kan beekaman ta’uusaanii eeranii, waggaa darbe hongee El-niinoon qaqqabsiise waliin dabalatee kuntaalli miliyoona 3 ol oomishameera jedhaniiru.
Warshaalee duraanii kannen malee waggaa kana hojiitti akka seenan kan eegamanii fi waggaa darbe adeemsa yaaliirra kan turan Arjoo Dhidheessaa fi Tindaahoon meeshaan isaanii jijjiirameera.
Suphaan barbaachisaa kan raawwatameef fi kanneen haaraa dabalatee walumaagalatti warshaaleen torba hojii yaalii oomisha gahaa oomishuu isaan dandeessisu xumuruusaanii itti-aanaa hoji-raawwachiisaan kun ibsaniiru.
Waggaa dabarsine oomisha osoo hin-oomishin adeemsa yaalii keessa kan darban Arjoo Dhedheessaa fi Tindaahoo dabalatee Warshaan Sukkaaraa Oomoo haaraan warshaalee oomisha jalqaban keessatti argamu jedhaniiru.
Itiyoophiyaan warshaalee sukkaaraa torba keessaatti waggaa kana kuntaala miliyoona 7 ol oomishuuf karoorfatteetti.
Warshaaleen kunniinis fedhii sukkaaraa biyya keessaa haala gahaa ta’een danda’uu oomisha dandeessisu akka oomishaniif carraaqiin nitaasifama kan jedhan Obbo Waayyuun, dhuma ji’a qabame kanaatti warshaaleen kunniin oomisha nijalqabu jedhaniiru. Taarik Addunyaatu gabaase.
More in this category: « Hoospitaalli Zawdituu yaala qulqullina kalee laachuu eegale Bara darbe namoonni miiliyoona 8 ol HIV qoratamaniiru »
Torbe Kana 1668
Ji'a Kana 1668
01/05/07 irraa eggalee 3422839